Trump: Albaabbada ayaan u laabayaa dowladda si aan u dhiso derbiga Mexico - BBC News Somali
Trump: Albaabbada ayaan u laabayaa dowladda si aan u dhiso derbiga Mexico
Image caption Donald Trump ayaa ka hadlay soo galootiga, daryeelka caafimaadka iyo cadowgiisa intii lagu jiray isu soo bixii Arizona
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wacad ku maray inuu albaabbada isugu laabayo dowladda Mareykanka haddii loo baahdo, si derbi looga dhiso xadka Mexico.
Madaxweynaha ayaa taageerayaashiisa ugu sheegay isu soo bax hal-ku-dhiggiisu ahaa "Ka dhig Mareykanka Mid weyn Mar kale" oo ka dhacay Phoenix, Arizona, in Dimuqraadiyiinta mucaaradka ah ay dib u dhigayeen arrintaasi.
Intii ay socotay khudbadda 80-ka daqiiqo ahayd, ayuu sidoo kale uga hadlay warbaahinta, isagoo ku eedeeyay inay fursad siiyeen kooxaha midig fog.
Balse wuxuu si gaar ah u soo xigtay jawaabtii uu hore uga bixiyay rabshadihii ka dhacay isu soo baxa kooxaha midig fog ee ay haweeney ku dhimatay.
Arrinta ku saabsan soo galootiga, wuxuu Trump eedeeyay Dimuqraaddiyiinta, oo uu ku sheegay in ammaanka Mareykanka ay khatar gelinayaan iyagoo ka soo horjeestay derbiga uu doonayo inuu ka dhiso xadka koofureed ee Mareykanku uu la wadaago Mexico.
Wuxuu sheegay in saraakiisha socdaalka ee ka shaqeeya halkaasi ay sheegeen inay muhiim tahay joojinta qulqulka muhaajiriinta sharci-darrada ah.
Madaxweyne Trump ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay: "Hadii ay noqoto inaan albaabbada u laabno dowladda, waxaan dhiseynaa derbiga."
Nafta iyo Kuuriyada Waqooyi
Khudbaddiisa dheer, ayuu Trump sidoo kale ku sheegay inuu u maleynayo inuu soo afjari doono Nafta", oo ah heshiiska ganacsi ee u dhaxeeya Mareykanka, Mexico iyo Canada oo uu dhowr jeer weeraray.
Saddexda dal ayaa bilaabay wada hadal ay dib ugu eegayaan heshiiska, dhexdhexaadiyeyaasha ayaana lagu wadaa inay mar kale kulmaan 1-da September.
Kuuriyada Waqooyi, ayuu madaxweynuhu rajo wanaagsan ka muujiyay suurto-galnimada ah yareynta xiisadda ka taagan tijaabada hubka iyo barnaamijka nukliyeerka ee xukuumadda Pyongyang.
Isagoo ula jeeda hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, ayuu Trump yiri: "Waxaan xushmeynayaa xaqiiqda ah inuu bilaabay inuu na xushmeeyo."
Balse inkastoo hadallada madaxweynaha looga riyaaqay gudaha xarunta shirka, haddana dibad baxayaal ka soo horjeeda Trump oo isugu soo xoomay bannaanka ayaa waxay isku dhaceen booliiska kaddib markii uu isu soo baxu dhammaaday.
Booliiska ayaa adeegsaday gaaska dadka ka ilmeysiiya kaddib markii ay dibad baxayaasha ku tureen dhalooyin iyo dhagxaan.